Ama-BF5 Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
IMPI 5 IMIGAQO
I-Gamepron ine-Battlefield 5 Aimbot engcono kakhulu, i-ESP, iWall Hack, neNoRecoil ukunqoba zonke izidingo zakho zokugenca. Umdlalo uzuzwa kalula uma ukhetha ukukopela ngamathuluzi athembekile avela ku-Gamepron!
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks wethu we-Battlefield 5, qiniseka ukuthi ithuluzi olifunayo ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma lisaxhumekile ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Battlefield 5 Hacks
Indawo yempi 5 Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks nokuningi
Thenga Battlefield 5 Hacks in 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuthenga ama-hacks walapha ku-Gamepron
Njengoba kunezici eziningi kangaka ezitholakalayo, khetha ama-hacks alungele izidingo zakho ngokuphelele
Zonke izinkokhelo zakho zizophathwa yinkqubo yethu yokukhokha etholakalayo kuphela
Ukufinyelela Ukhiye Wakho & Landa i-Battlefield 5 Hacks!
Lapho usunokhiye womkhiqizo wakho, ungalanda i-BF5 Cheat!
Kungani Usebenzisa i-Gamepron Battlefield 5 Hacks?
Uzokhipha okuningi njengoba uzimisele ukufaka emdlalweni onjenge-Battlefield 5, okuyisizathu sokuthi kungani iningi lamakhasimende ethu ethembele kithi ukuthi sizokwakha ithuluzi elithembekile lezidingo zabo ze-BF5 Hack. Kunezindlela eziningi zokubhekana nenqubo yokukopela, eziningi zazo ezizobeka i-akhawunti yakho engcupheni - uma ukhetha ukuthenga ama-BF5 cheats kusuka "kumthombo onomthunzi", nakanjani uzolanda uhlobo oluthile lokuqukethwe okunonya. Cabanga ukuthi bangaki abantu abathosa amakhompyutha abo ngoba abenzi ukuthenga kwinsizakalo yobuchwepheshe! I-Gamepron inikezelwe ekuhlinzekeni abasebenzisi bethu ngobuningi bamathuluzi nezici zokuthuthukisa isipiliyoni sabo semidlalo, futhi sikwenza ngezinga elingabizi (uma kuqhathaniswa nabanye abahlinzeki bama-premium emakethe).
Ngenkathi ukukopela kuthola idumela elibi kwesinye isikhathi, kusobala ukuthi kusengenye yezinto ezithandwa kakhulu ukwenziwa lapho udlala ku-inthanethi. Ukuhlelwa kuzohlala kunokuncintisana kungakhathalekile ukuthi udlala muphi umdlalo, kepha iBattlefield 5 izozwa ukuthi yi-surreal ethe xaxa! Ukunqoba emdlalweni onjengalo kungathatha iminyaka yokuzijwayeza nokusebenza kanzima noma umane ukukopela okulungile kwe-BF5 - lapho uthenga ama-hacks akho ku-Gamepron, uyazi ukuthi imali isetshenziswa kahle.
Singathembisa abathengi bethu abasezingeni eliphakeme le-Battlefield 5 hacks, futhi leyo yinto amanye amasevisi angakwazi ukufuna yona. Ngenxa yalokhu, sizozibheka njengomhlinzeki oholayo wawo wonke ama-hacks we-Battlefield 5. Ukuthi unentshisekelo yini nge-BF5 Aimbot noma i-BF5 ESP akunandaba, ngoba singakusiza ukuthi uthole ukufinyelela kunoma yiziphi izici ozifuna kakhulu. Zibophezele kuwe bese uqala ukuwina ukufana okuningi! Amamephu makhulu e-Battlefield 5, okusho ukuthi kusetshenziswa ukuthandwa kwama-hacks ethu okulandela umkhondo (njenge-Battlefield 5 ESP ne-Wall Hack noma isici se-Battlefield 5 Footprints) kuzokusiza uchume ngezindlela ezingaphezu kweyodwa.
Ukulungele ukusebenza nenkampani ethembekile enesifiso esihle kuwe? Noma yini ohlela ukuyenza nama-BF5 Hacks wethu kukuwe, kodwa okokuqala, kufanele uzitholele ukhiye womkhiqizo. Sinikeza izinketho zesikhathi ezihlukile ezimbalwa futhi sizohlala siguquguquka ngangokunokwenzeka namakhasimende ethu, ngakho-ke ulindeni? Qalisa nge-Battlefield yethu ye-5 Hacks namuhla!
I-Battlefield 5 Wall Hack (ESP)
Indawo yempi 5 Imininingwane yomdlali i-ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Indawo yempi 5 Into ESP enezihlungi
Inkundla yempi 5 i-Aimbot
Izimpi zesexwayiso sezitha zempi yempi 5
Imodi yempi yempi 5 super jump mode (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe).
Indawo yempi 5 bone & aim ukhiye okulungisekayo.
Indawo yempi 5 Buyisela isinxephezelo
Impela BF5 Hack Izici
Ama-BF5 Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, i-Wall Hacks nokuningi
I-BF5 Wall Hack (ESP)
Sebenzisa i-Battlefield 5 Player ESP yethu ukugcina umkhondo wezindawo zesitha, ukuvumela ukuthi uzibone kuzo zombili izindawo eziqinile nezikhanyayo.
Imininingwane yabadlali be-BF5 ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Awukwazi nje ukubona amamodeli wesidlali ezindaweni eziqinile / ezi-opaque, njengoba ukwazi ukubona imininingwane yomdlali futhi (igama, impilo, nebanga).
I-BF5 Into ESP enezihlungi
Sebenzisa indawo yethu yempi 5 Item ESP ngezihlungi ukukhomba izinkinga ezingaba khona ngezindawo ezikuzungezile (njenge-Land Mines noma ezinye iziqhumane ezingakubulala).
Thatha konke uhamba phambili ngeBF5 Aimbot yethu! Ngale njongo engenakulinganiswa, awukho umphefumulo kule planethi ozokwazi ukukuvimba.
Ithrekhi yeBF5 Bullet (esebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Sebenzisa isici se-Bullet Track ngaphakathi kwe-Battlefield 5 Hack yethu yokulandelela ukuthi isibhamu sakho sifika kuphi (ilungele isibhamu esifushane kuya kwaphakathi nebanga)
BF5 izexwayiso zesitha
Imilayezo exwayisayo izovela esikrinini sakho noma kunini lapho isitha sisondelene noma kwenzeka nje ukuthi uhlose uhlamvu lwakho.
Imodi ye-BF5 super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe)
Sebenzisa i-Super Jump Mode efakwe ngaphakathi kwempi yethu ye-5 Hack ukuzivimba ekuthatheni umonakalo wokuwa! Phuma ezindizeni zempi ngokuzethemba usebenzisa i-Gamepron.
BF5 bone & aim ukhiye okulungisekayo
I-Battlefield yethu i-5 Aimbot iza ifakwe ukuthandwa kwe-Bone Prioritization nokunye okuningi ongakhetha kukho okulungiselelwe ukusebenza nakho - bulala kalula!
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-BF5 aimbot
Uhlelo Lokuhlola Olubonakalayo lukhona lapho usebenzisa i-Battlefield 5 Aimbot yethu, njengoba uzokwazi ukuqinisekisa ukubulala kwakho ngaphandle kokukhathazeka uma lesi sici sinikwe amandla.
BF5 Buyisela isinxephezelo
I-Recoil ayisoze yaba lusizo ngesikhathi sokuqhuma kwesibhamu, yingakho uzofuna ukuyisusa usebenzisa i-Recoil Compensator yethu lapho kungenzeka khona!
Iba Best Battlefield 5 Player on the Planet
Sonke sifuna ukuba phambili kunakho konke empilweni, futhi kwesinye isikhathi lokho kuzocela usizo oluthile. Ungathathi kalula i-BF5 Hack yethu, njengoba kunezici ezingaphezu kokwanele ukukugcina ukulungele ukunqoba kwakho okungenakugwemeka ngawo wonke umdlalo owodwa. Azikho ezinye izindlela ngaphandle lapho zokusebenzisa iBF5 Hack yethu, njengoba i-Gamepron izokonakalisa indlela ozizwa ngayo nganoma yimuphi omunye umhlinzeki we-hack.
Indawo yempi edumile engu-5 Hacks futhi ikopela
Inkundla yempi 5 ESP neWallhack
Ngaphandle kokuthi izici ezithandwa kakhulu zisetshenziswe, ukusebenzisa i-BF5 Hack ngeke kukusize ngalutho. Lapho ungakathandi ukuthandwa kwe-BF5 Aimbot, BF5 ESP & Wall Hack, noma isici se-BF5 Removals, kuzoba nezikhathi lapho abasebenzisi bakho bezindla khona ngokuthi ukugenca kufanelekile yini ngentengo. Ngenkathi sikwazi ukugcina indawo yethu yempi eyi-5 Hack ihlome kahle ngazo zonke izici zakho eziyizintandokazi, sikwazile nokwethula eminye imibono emisha sha kumxube. Ngenkathi ungajwayela indlela yendabuko yokugenca (okusho ukuthi ujwayele ukusebenzisa ngokuqinile i-Aimbot neWall Hack), iGamepron kuzoba ushintsho oluhle lwejubane lakho.
Sinikeza ama-hacks afanele kuyo yonke imidlalo oyikhonzile, futhi ne-Battlefield 5 iyathinteka. Asigcini ngokukunikeza ngezici eziningi ezahlukahlukene ongazisebenza nazo, kodwa lokho sikwenza ngokuphepha nangokuvikelekile.
Ulahlekelwe kangaki umentshisi ngoba uhlulekile ukuphatha ukushisa kwesibhamu? Kunabantu abaningi abanentshisekelo ye-Battlefield 5 Aimbot ngokwabo, ngoba kuzokwenza ukuthi ukunqoba kuphumelele inqubo elula ngenkathi idlala. Ungahle ukhethe uma kukhulunywa ngabalingani beqembu, kepha ukuthi unabangani ongajoyina ubumnandi noma cha akunandaba! Uma une-BF5 Aimbot yethu othembela kuyo, umphikisi uzovele azindle ngezimpilo zabo ngakho konke ukuphindisela. Uma ungasusi indawo yokwamukela izivakashi ngokushesha, asiyenzi imisebenzi yethu kahle! Ngeke nje ube ne-Bone Prioritization, kepha nesici se-Auto-Aim / Fire sisebenza kahle. Nge-Smooth Aiming nezinye izinketho ezilungiswayo ukugcina abaphikisi bakho beqagela, kuwina-win.
Akudingeki uchithe sonke leso sikhathi uzama ukucija ubuciko bakho, njengoba ungavumela nje i-BF5 Aimbot yethu futhi ubuke ukubulawa kuqala ukunqwabelana.
Lapho ufuna i-BF5 Hack ephephile nethembekile, i-Gamepron ibuyela emuva. Ungawina ngendlela eyengeziwe ngokusebenzisa i-Battlefield 5 ESP neWall Hack yethu, njengoba abanye bengasho ukuthi iyindlela elula yokuthuthukisa amakhono akho. Uzokwazi ukuthi abantu bazokhempa kanjani ngokungaguquguquki, njengoba uzobona amathambo abo wesidlali ezindaweni eziqinile / ezi-opaque - ungabona futhi ukuthandwa kwe-Item ESP ngezihlungi, okukuvumela ukuthi uthole izibhamu ezingcono nezinsongo ezingaba khona (njenge-Land Izimayini noma ezinye iziqhumane) ezicashe ebalazweni. I-gameplay oyithola ku-Battlefield 5 izwa sengathi iyimpi yangempela kwesinye isikhathi, yingakho udinga ukuba nesandla esikhulu ngangokunokwenzeka.
Ungabona ukuthi ngubani amagama abo ngokusebenzisa i-BF5 ESP yethu, nokuthi yiziphi izikhali abazisebenzisayo nokuthi banempilo engakanani. Ibanga labo liyabonakala futhi, njengoba lokho kuzokugcina uphapheme futhi ukulungele ukugoqa.
Ngabe ufuna ukulandela izitha zakho njengezilwane zasendle? Ungazizingela njengezinyamazane uma unikwe amandla isici seFootprints, njengoba uzokwazi ukubona imikhondo ekuholela ngqo esitheni. Ilungele labo abathanda ukuzulazula, ungazisebenzisa zombili izici ze-Footprints ne-High Damage ngaphandle komthungo - ukudubula abantu ngemuva akukaze kwanelise esikhathini esedlule! Noma ngabe ungumdlali onolaka noma othanda ukuzenyeza, ukusebenzisa isici sethu se-High Damage kuzokubeka ethubeni elingcono lokuwina. Isici se-Distance sibuye sithinte kahle, ngoba sikuvumela ukuthi ubone ukuthi izinsongo zakho ezingaba khona zikude kangakanani.
Uma ubudlala i-Battlefield 5 isikhashana, uyaqonda ukuthi amamephu makhulu futhi kuzoba nethuba lokweqa iphuzu lokuphindisela labaphikisi bakho. Ngeke uphinde ulahlekelwe yi-BF5 Hack yethu enikwe amandla, singakuthembisa okuningi.
Ukulima okuzala okubulalayo kungumoya lapho uvulelwe ukulimala okuphezulu, futhi lokho kungakhala kakhulu uma kufanele unqume ukusebenzisa i-BF5 Aimbot yethu ngaphezulu kwalokho! Noma ngabe yiziphi izici ozifunayo ku-BF5 Hack kungenzeka zibe khona lapha, futhi uma kungenjalo, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi - sithanda ukuthatha iziphakamiso ezivela kubasebenzisi bethu, ikakhulukazi uma benokuqonda okuthile abangakunikeza . Asigcini nje ngokuma kwi-BF5 Aimbot ne-BF5 Wall Hack yakho yendabuko, njengoba kunezinye izici ezimbalwa okufanele uzicabangele ngaphambi kokuthenga. Njengoba sishilo ngaphambili kunemodi ye-Super Jump efakwe ku-Battlefield 5 Hack yethu, okuyisici esikuvumela ukuthi uthathe umonakalo wokuwa ngaphandle kokufa. Ngeke ulinyazwe ngisho nokuphakama okude kunakho konke ongakucabanga!
Esinye isici esicocekile kufanele kube inketho yezexwayiso, ezokhombisa umlayezo owenziwe waba ngowakho esikrinini sakho noma kunini lapho isitha sisondele khona.
Ama-BF5 Hacks Imibuzo
Kungani ama-BF5 Hacks ethu
Abantu beza kithi ngazo zonke izidingo zabo ze-Battlefield 5 Hack ngoba bayazi ukuthi simayelana nekhwalithi lapha eGamepron. Ngeke sisike amakhona sizame ukudonsa okusheshayo kumakhasimende ethu, ngoba lokho akunangqondo - sifuna ukwaziwa njengonjiniyela wekhwalithi ephezulu, futhi ukuphela kwendlela yokwenza lokho kungokwakha ukwethembana.
Kungani iBF5 Aimbot yethu
Izitha zizocabanga ukuthi zikutholile, kepha uzobenza bacabange futhi ngokusebenzisa i-Battlefield 5 Aimbot yethu. Ngenhloso ye-stellar engenakuqhathaniswa nabadlali abahle kakhulu abaseduze, uzoba nokuzethemba (nokunemba) okudingekayo ukuqeda wonke amaqembu uwedwa. Ukuba yimpisi eyodwa e-Battlefield 5 akukaze kuzwe lokhu kwanelisa!
Kungani iBF5 ESP yethu
Ngokusebenzisa i-Battlefield 5 ESP yethu, uzibeka ethubeni lokuvelela kungakhathalekile ukuthi ufaniswa nobani. Lapho ubona izinsongo ezingaba khona ngendlela yazo zombili izinhlobo zezidlali nezinketho ze-ESP eziqhumayo, kuncane okuzokubulala kumdlalo. Uzohlala wazi ukuthi isimo sinjani ngaphambi kokungena nge-BF5 ESP yethu yenziwe yasebenza!
Kungani iBF5 Wallhack yethu
Cabanga nje ukuthi unamandla e-superhero ngenkathi udlala i-Battlefield 5 - kuhle kakhulu, akunjalo? Yilokho okwenza i-Battlefield 5 Wall Hack yethu isebenziseke kangaka, njengoba abadlali abaningi emhlabeni wonke beyisebenzisa ukubona lapho izitha zabo zicashe khona. Akudingeki ukuthi ujike kancane emakhoneni
Kungani iBF5 Norecoil yethu
Ukubuyisa kuyacasula, kuningi esingavumelana ngakho - ngakho-ke kungani singakususi ngokuphelele ngokusebenzisa i-Battlefield Recoil Compensator yethu? Awudingi ukuthandazela ukuthi ukubuyiswa okungahleliwe kwesibhamu sakho kukuvumele ukuthi ubulale isitha, ngoba ngeke kudingeke ubhekane naso kwasekuqaleni. Lokhu kuguqula umdlalo impela, futhi kuyisici okungafanele usishaye indiva.
Ungawalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-BF5?
Ungalanda i-Battlefield 5 Hacks engcono kakhulu lapha ku-Gamepron. Siyazi ukuthi wonke umakhi we-hack emhlabeni uzosho ukuthi “anamathuluzi amahle kakhulu aseduze”, kepha uma uke wasebenza nathi esikhathini esedlule, uyazi ukuthi asiziphathi kabi.
Kungani ama-hacks wakho we-BF5 abiza kakhulu kunamanye
Sinesibalo esilinganiselwe kuphela semithombo esetshenziselwe abantu abangayisebenzisa lapha ku-Gamepron, okusho ukuthi asikwazi ukubhekelela wonke umuntu ofuna ukusebenzisa i-Battlefield 5 Hack yethu. Ngenxa yalokho, kuye kwadingeka sishintshe amanani ethu ngokufanele - akusikhona ukuthi insizakalo yethu iyodwa kuphela okufanele siyisebenzise, ​​kodwa futhi inikela ngama-hacks angatholakali ayi-100%.
Kukhona umkhawulo wesikhathi ozohambisana nezidingo zanoma ngubani. Sinikeza okhiye bethu bomkhiqizo nsuku zonke, masonto onke, noma ngenyanga - noma yini ohlela ukuyenza ngama-hacks kufanele kufezwe kalula, njengoba usuvele wazi ukuthi unesikhathi esingakanani usebenzisa amathuluzi ethu. Ngalezo zikhathi, uzoba nokufinyelela okungenamkhawulo ku-Battlefield 5 Hacks yethu!
Okukhethiwe kwethu BF5 Hacks
Awesome BF5 Hack Izici